Duet: Ampiasao ny iPad ho mpanara-maso fanampiny | Martech Zone
Alatsinainy, 17 Jona, 2019 Alatsinainy, 17 Jona, 2019 Douglas Karr
Indraindray dia mahita rindranasa mahavariana ianao manontany tena hoe nanao ahoana ianao raha tsy nanao. Niasa tamina tranokely iray taonina niaraka tamin'ny mpanjifa sy tany amin'ny toeram-piaraha-miasa eto amin'ny firenena aho, saingy sarotra tamiko ny namokatra tamin'ny efijery iray fotsiny. Rava aho tamin'ny fananana efijery marobe tao amin'ny biraoko, ary naniry zavatra ho an'ny arabe aho.
Ny fandinihana natao tany Utah dia nahitana fiakaran'ny 44% ny mpiasa vokatra ho an'ny lahasa an-tsoratra sy fiakarana 29% ho an'ny lahasa momba ny takelaka rehefa mifindra amin'ny tokana efijery ho an'ny lafiny roa-Monitor hametraka.
Nahita fampiharana ho an'ny iPad aho, Duet, izay novolavolaina sy namboarin'ireo injeniera Apple sasany, ary nahagaga tokoa. Mahagaga ny latency, mbola afaka mampiasa ny efijery mikasika aho, ary afaka mamela ny fahaizan'ny bara fitendry amin'ny efijery iPad.
Ity misy sary iray avy amin'ny latabatra lavitra any amin'ny iray amin'ireo mpanjifako. Ampidirina a DisplayLink plugable ho an'ny mpanara-maso ny birao sy ny tamba-jotra, avy eo ampidiro amin'ny alalàn'ny USB mankany amin'ny DisplayLink ny iPad Pro. Ny DisplayLink dia tsy fitaovana enti-miasa… izay ananan'izy ireo ao amin'ity mpanjifa manokana ity fotsiny.
Azoko atao ny mampifanaraka ny fampirantiana amin'ny alàlan'ny sehatr'asan'ny OSX ary afaka misintona sy milatsaka amin'ny efijery rehetra aho.
Rehefa lasa aho dia mitondra ny laptop-ko sy ny iPad-ko fotsiny na aiza na aiza ary apetrakao aiza aho. Mila mihazakazaka amin'ny rindrambaiko roa ny fampiharana Duet, saingy tsio-drivotra ny fanomanana ary raha vao niditra tao amin'ny USB aho dia velona ny monitor. Mbola afaka mampiasa ireo rindranasa iPad hafa aza aho raha tiako izany.
Duet dia nanao ny rindrambaiko ho an'ny PC ihany koa!
Tags: fampisehoana duetFampisehoana iPadfanaraha-maso faharoafanaraha-maso fahatelo
Ahoana ny fampiasan'ny orinasa entana entana entana?